Madowga Nolosha Madoow - AfricanArXiv
Published by AfrikArXiv on 15th Juun 2020 15th Juun 2020
Waxaan u taaganahay midnimo wada noolaanshaha jaaliyadaha Madow ee Mareykanka Mareykanka - #BlackLivesMatter
AfricanArXiv waxay u jirtaa inay wax ka qabato caqabadaha hay'ad iyo nidaam iyo eex ee nidaamka daabacaadda cilmi-baarista ee cilmi-baarisyada si loo siiyo cilmi-baarayaashan Afrikaanka ah madal cad oo ay ku taageeraan inay la xiriiraan howlaha ay ka qabtaan qaaradda iyo wixii ka dambeeya.
Waajibaadka bulshadaArArXiv waa in la dardar galiyo aragtida baaritaanka Afrika. Anaga oo ah koox dhaqamo badan iyo dhaqan ahaan kala jaad jaad ah oo ka kala yimid 10 dal oo kala duwan waxaan ku faanaa soo bandhigida horumarka ku saleysan dhammaan cilmiga saynisyahannada Afrikaanka ah ee ka kala yimid qaaradaha iyo qurbaha. Waxaan ku qanacsanahay in bulshada cilmi baarista caalamiga ah ay ka faa iideyso isdhaafsiga aqoonta iyo khibrada leh ee qeybaha adduunka oo dhan, gaar ahaan sida aan wax uga qabanno caqabadaha adduunka sida isbedelka cimilada, masiibooyinka, saboolnimada iyo tahriibka khasabka ah.
#BlackLivesMatter iyo #BlackVoicesMatter
Waxaan si farxad leh ugu dabaaldegnay sannad-guuradii 2aad eeAAXXiv bishii Juun 2020. AfricArXiv waxay laba sano jirsatay oo u adeegta sidii xayeysiis hordhac ah oo loogu talagalay shaqada cilmi-baarista ee mawduucyada Afrika ee ay sameeyeen cilmi baarayaasha Afrikaanka iyo kuwa aan Afrikaanka ahayn. Waxay ahayd Akhri wax dheeraad ah…